Fadeexad: Halyey Ka Fadhiistay Xulka Qaranka England Oo Weerar Kufsi Ah Ku Qaaday Gabadh Ay Tareen Wada Raaceen | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Fadeexad: Halyey Ka Fadhiistay Xulka Qaranka England Oo Weerar Kufsi Ah Ku Qaaday Gabadh Ay Tareen Wada Raaceen
Published on November 20, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(20-11-2018) Halyeygii hore ee xulka qaranka England khadka dhexe uga ciyaari jiray ee Paul Gacogne oo lagu naanaysi jiray Gazza ayaa xasbiga loo taxaabay, kaddib markii uu weerar ku qaaday haweenay ay wada saarnaayeen tareen.
Paul Gascoigne oo ay da’diisu tahay 51 jir ayaa ay boolisku soo qabteen, waxaana la kor keeni doonaa maxkamadda iyadoo lagu eedaynayo in markii ay taariikhdu ahayd August 20 ee sannadkan uu isku dayey inuu tareen socda ku dhex kufsado haweenay rakaab ahayd oo aan la magacaabin.
Ciyaartoygan hore oo sannadihii u dambeeyey la dhibaatoonayey maandooriyeyaal uu si xad-dhaaf ah u isticmaalo oo sababay in xannuuno-nafsi ah ay ku dhacaan, ayaa waxa lagu xidhay xarunta booliska Durham Stadiion, waxaana soo qabtay ciidamada booliska ee British Transport.
Warbixin ay soo saareen boolisku ayay ku sheegeen in Paul Gascoigne uu ku lug yeeshay fal ka dhex dhacay gabadh ay tareen wada saarnaayeen oo keenay inay gacantiisu gaadho.
Halyeygan oo xulka qaranka England u saftay 57 ciyarood, ayaa maxkamadda la hor keeni doonaa December 11.
Hadal kooban oo uu ku qoray bartiisa Twitterka oo daqiiqado kaddibna la masaxay ayaa waxa uu ku sheegay in gabadhu ay aflagaadaysay, taasina keentay inuu isku maqiiqo.
“Waxay igu tidhi, waxaad tahay ‘SAC NAAXAY’. Markaa waa maxay sababta aniguna aanan u qaldamayn.” aAyuu ku yidhi qoraalkiisa la masaxay.
Warbixin taas lidkeeda ah ayaa ay boolisku sheegeen inuu ku qoray warbixintii laga qoray markii la xidhay, markaas oo uu sheegay inuu haweenayda ka dalbaday inuu la galo sawir.